Vaovao - Raha resaka sôkôla no resahina dia resaka fotoana daholo!
Mahatonga anao matavy ve ny sôkôla?Toa tsy misy isalasalana izany.Amin'ny maha mariky ny siramamy avo lenta, ny tavy ary ny kaloria, ny sôkôla fotsiny dia toa ampy hampandositra ny mpihinana sakafo.Hitan’ny mpikaroka ao amin’ny Oniversiten’i Harvard anefa izao fa ny fihinanana sôkôla amin’ny fotoana mety isan’andro dia mety hanampy amin’ny fandoroana tavy sy hampihenana ny siramamy ao amin’ny ra, fa tsy hampisy lanja.
Ny fandinihana teo aloha dia nahita fifandraisana misy dosie miankina amin'ny fahazarana mihinana sôkôla sy ny fahazoana lanja maharitra, indrindra amin'ny vehivavy postmenopausal, izay mety hihamatanjaka kokoa.Ankoatr'izay, ny fihinanana sakafo avo lenta sy siramamy toy ny sôkôla amin'ny fotoana "tsy mety" dia mety hisy fiantraikany amin'ny rafitry ny circadian'ny vatana sy ny fiasan'ny metabolika, ka mety ho voan'ny matavy loatra.
Mba hahitana ny vokatry ny fihinanana sôkôla amin'ny fotoana samy hafa, ny mpikaroka dia nanao fitsapana crossover voafehy tsy tapaka miaraka amin'ny vehivavy 19 postmenopausal.Ao anatin'ny toe-javatra misakafo maimaim-poana, ny vondrona maraina (MC) sy hariva (EC) dia nandany sôkôla ronono 100g (eo ho eo amin'ny 542 calories, na 33% amin'ny angovo isan'andro) ao anatin'ny adiny iray mifoha maraina na adiny iray. alohan'ny hatory amin'ny alina;Ny vondrona hafa dia tsy nihinana sôkôla.
Taorian'ny tapa-bolana, ny vehivavy ao amin'ny vondrona maraina sy hariva dia tsy nahazo lanja lehibe, na dia nanampy kaloria aza ny sôkôla.Ary nihena ny andilan’ny vehivavy rehefa nihinana sôkôla ny maraina.
Izany dia satria ny fihinanana sôkôla dia mampihena ny hanoanana sy ny filan'ny nify mamy (P<.005) ary nampihena ny fihinanana angovo maimaim-poana amin'ny ~ 300 kcal / andro mandritra ny MC sy ~ 150 kcal / andro mandritra ny EC (P =. 01), saingy tsy nanonitra tanteraka ny fandraisana anjara angovo fanampiny amin'ny sôkôla (542 kcal / andro).
Ny famakafakana singa fototra dia naneho fa ny fihinanana sôkôla amin'ny fotoana roa dia niteraka fizarana sy fiasa microbiome samihafa (P<.05).Ny sarintanin'ny hafanana amin'ny hato-tanana sy ny firaketana torimaso dia nampiseho fa ny fizaran'ny torimaso ec-induced dia matetika kokoa noho ny MCS ary manana fiovaovana ambany kokoa amin'ny andro fizaran'ny torimaso (60 minitra vs. 78 minitra; P =. 028).
Izany hoe, ny fihinanana sôkôla amin'ny maraina na amin'ny alina dia mety hisy fiantraikany isan-karazany amin'ny hanoanana, ny fahazotoan-komana, ny oxidation substrate, ny glucose amin'ny rà fifadian-kanina, ny firafitry ny microbiome sy ny asany, ny torimaso sy ny gadona hafanana.Ankoatra izany, ny sôkôla koa dia misy fibre ara-tsakafo, izay afaka misoroka sy manamaivana ny fitohanana, mampiroborobo ny vatana hamoaka ireo metabolites taloha, misoroka ny ketrona sy ny pentina, ary mamorona tontolo tsara ho an'ny hatsaran-tarehy.
Noho izany, ny fihinanana sôkôla amin'ny fotoana mety, dia tsy vitan'ny hoe tsy matavy, fa mety manify.Fa “ny quantité no mitondra any amin’ny qualité”, ary raha mihinana sôkôla be loatra ianao dia mety tsy hitovy ny vokany.
Fotoana fandefasana: 26-08-21